Ama-Proteas aqhubeka nokunqoba edlala ne-Bangladesh
celebrating during the 1st KFC T20 match between South Africa and Bangladesh at Mangaung Oval on October 26, 2017 in Bloemfontein, South Africa. (Photo by Johan Pretorius/Gallo Images)
u-Andile Phehlukwayo uhole umdlalo omuhle kulaba abaphosayo abasha kuma-Standard Bank Proteas ukuze bahlule i-Bangladesh ngama-runs kumdlalo wokuqala we-KFC T20 International e-Mangaung Oval ngoLwesine ebusuku.
Umdlalo wesibili uzodlalelwa e-Senwes Park e-Potchefstroom ngeSonto ntambama.
u-Phehlukwayo uthole u-2/25 ukumisa indlela enhle i-Bangladesh eqale ngayo kwi-innings yayo bese u-Dane Paterson waphosa kahle ekupheleni komdlalo wathola u-2/29.
Umdlali omusha u-Robbie Frylinck angazizwa ejabulile ngomdlalo wakhe wokuqala lapho ethole khona u-2/33.
i-Bangladesh iqale ngokuzimisela njengoba behlanganise ama-runs angu-90 kuma-overs okuqala ayisishagalolunye ngaphambi kokuthi u-Phehlukwayo akhiphe u-Soumya Sarkar (47 off 31 balls, 5 fours, 2 sixes).
Ama-Proteas anqobe i-toss akhetha ukushaya kuqala futhi bahlanganisa umphumela ongu-195/4 onezezelwe i-partnership ye-wicket yesibili yama-runs angu-79 phakathi kwa-Quinton de Kock (71 off 44 balls, 5 fours, 1 six) ne-Man of the Match u-AB de Villiers (49 offs 27 balls, 8 fours) bese kwaba i-partnership ehlanganiswe u-David Miller no-Farhaan Behardien abahlanganise ama-runs angu-62 kuma-overs amahlanu okugcina.
u-Behardien udlale i-innings encomekayo kuma-Proteas yama-runs angu-36 emabholeni angu-17 okubalwa khona o-four ababili no-six ababili.
u-Mehidy Hasan uphose kahle kwi-Bangladesh wathola u-2/31 kuma-overs amane.
Ama-Proteas ahlose ukulawula i-Bangladesh u-Frylinck ubheke ukugcina izinto zilula enkundleni enkulu u-Frylinck ubizwe kwiqembu lama-Proteas kuma-T20